हरिया डाँडा बीचमा काठमाडौं उपत्यका। डाँडाबाट देखिन्छन् सलाइका बट्टाजस्ता घरहरु। हरियो उपत्यकालाई पहरा दिइरहेका डाँडाहरु ! एउटा होइन, दुइटा होइन, दर्जनौं डाँडा। एक माथि अर्को खप्टेर बसेका। त्यही हरिया डाँडा माथि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १८० डिग्रिमा फैलिएका सेता हिमाल। गणेश, लाङटाङ, दोर्जे लाक्पा, गौरीशंकर, सगरमाथा आदि। घमाइलो दिन, भालेश्वर टपबाट यस्तै दृश्य देखिन्छ। भालेश्वर (२,५००मिटर)मा केबलकार बनेको छ। अढाइ किमि लामो केबुलकारमा १० मिनेट लाग्छ थानकोटबाट भालेश्वर पुग्न। केबुलकार सञ्चालकले तीन तले प्यागोडा शैलीको मन्दिर बनाएका छन्। त्यसभित्र राखिएको छ भालेश्वर महादेवका शिला। पहिला खुला आकाशमुनि रुखको छहारीमा बसेका थिए ती।
भालेश्वर आफैंमा भ्यू टावर हो। आकाश खुलेका दिन भालेश्वरमा बसेर सिंगो काठमाडौं उपत्यका र हिमाल हेर्दा मन पुलकित हुन्छ। भालेश्वर ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। नेपाल एकिकरण तयारीका बेला राजा पृथ्वीनारायण शाह मामाघर भएर चन्द्रागिरी भञ्ज्याङ आएका थिए। भञ्ज्याङबाट सुन्दर काठमाडौं उपत्यका देखेपछि उनलाई काठमाडौंलाई जित्ने इच्छा भयो। र, उनले नजिकैको भालेश्वर आएर भाकल गरे। पछि यही बाटो भएर काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गरि जिते। भालेश्वरसम्मै थानकोट पछाडि गोदाम (१,४५०मिटर)बाट गाडि चल्छ। हाइकिङ गर्दा गोदामबाट सुरु गरे राम्रो। स्वच्छ हावा लिँदै उकालो चढ्ने। हिँड्ने दुई बाटा छन्। मोटरेबल सडक र ठाडो गोरेटो। करिब २ देखि ३ घण्टा उकालो चढेपछि पुगिन्छ चन्द्रागिरि भञ्ज्याङ। काठमाडौं र मकवानपुरको साँधमा भञ्ज्याङ (२,२५०मिटर)। गोदामबाट चन्द्रागिरी ठाडो उकालो ३.८ किमि र मोटर बाटो ४.५ किमि।
भन्ज्याङबाट उकालो लाग्ने। जति जति उचाइ चढ्दै गयौं उति उति हिमाल देखिन्छन्। दायाँबायाँ जंगल छ। केबलकार स्टेशनबाट माथि छ भालेश्वर मन्दिर। भालेश्वर टप काठमाडौं र मकवानपुरको संगममा पर्छ। त्यहाँ ध्यान र योग पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको राम्रो दृश्य देखिन्छ। बेलुकी काठमाडौंको झिलिमिलि मनमोहक देखिन्छ। भालेश्वरबाट चखेल देउराली हुँदै मातातीर्थसम्म पदयात्रा गर्न सकिन्छ। भालेश्वरमा बस्ती छैन। बस्ती पुग्न दुई किमि ओरालो झर्नु पर्छ। भालेश्वरबाट एक घन्टामा चखेल देउराली जहाँ राणाकालमै बनेको रोप वे स्टेसन छ। अचेल त्यो प्रयोगमा छैन।
चखेलबाट मातातिर्थ चाहिँ ६ किमि। दुई घन्टा लाग्छ ओरालो झर्न। मातातीर्थ पवित्र धाम। त्यहाँ आमाको मूर्ति छ। आमा खुवाउने औंशीका दिन मेला लाग्छ। हाइकिङ मातातिर्थबाट सुरु गरेर थानकोटमा अन्त्य गर्न पनि सकिन्छ। जताबाट हिँडे पनि पदयात्रा दुरी १६ किमि।
त्यो प्राचिन स्तुप छेउमा बत्ति बाल्ने पालाहरु छन्। ठूलो माने, नजिकै पुरानो गुम्बा छ। पुण्यभूमि नमो बुद्ध धार्मिक पर्यटन गन्तव्य बनेको छ। कात्तिक पूर्णिमा र बुद्ध पूर्णिमामा ठूलो मेला लाग्छ। नमो बुद्धका दुइ खण्ड छन्। तल भञ्ज्याङको स्तुप सबैभन्दा पुरानो हो। त्यसभन्दा २०० मिटर माथि डाँडामा गुम्बा र बुद्धका ठूल–ठूला मूर्ति छन्। जुन पछि बनाइएका हुन्। अध्यात्म, प्रकृति र संस्कृतिको त्रिबेणीधाम नमो बुद्ध शान्त र शितल छ। हावाले फर्फर गरिरहेका रंगीन धज्र्यू र लुङदारहरुले डाँडै झकिझकाउ देखिन्छ।
त्यहाँ खाना र बास बस्ने होटल तथा रिसोर्ट छन्। नमोः बुद्ध पुगेर भातृत्व, शान्ति र अहिँसाको पाठ सिक्न सकिन्छ। हामी नेपाली बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर घमण्ड गछौं तर बुद्ध बचन बिर्संदै गएका छौं। हामीले बुद्ध वचन अर्थात पञ्चशिल मात्र पालन गरे पनि समाज कति सुन्दर हुन्थ्यो होला ! मोटर बाटो त नमोः बुद्धसम्मै छ। हाइकिङ गर्दा भने प्राचीन नेवार वस्ती एवं हिल स्टेशन धुलिखेलबाट हजार सिंढी, शान्ति वन हुँदै नमो बुद्ध पुग्ने र नमोबुद्धबाट गाउँको बाटो हुदै शंखु पुग्ने। शंखु गाउँ कृषिका लागि उर्वर छ। त्यहाँ सुनमति कुण्ड र शंखबुद्ध पाउ पनि छ। सुन्तलाका लागि समेत शंखु क्षेत्र उपयुक्त छ। त्यहाँबाट शंखुपाटीचौर, ईटे हुँदै पनौती झर्न सकिन्छ। पदयात्रा दुरी १८ किमि। अर्को बतासेबाट शंखु, हुँदै नमोबुद्ध पुग्ने र फर्कंदा पातलेखेत गाविसको कुइँकेल डाँडा, गुम्बा हुँदै फस्कु गाउँ भएर काभ्रे भञ्ज्याङसम्म हिड्ने। बतासे–नमो बुद्ध ६ किमि र नमो बुद्ध–काभ्रे भञ्ज्याङ ७.५ किमि। नमोबुद्ध हाइकिङ, बाइकिङ, साइक्लिङ सबैका लागि उपयुक्त छ।
काठमाडौंबासीले मात्र २० किमी दुरीको नल्लु पुगे हुन्छ पाथीभरा दर्शन गर्न। त्यहाँ पुग्दा घन्टको टङ् टङ् आवाजले कान पवित्र बनाइ दिन्छ। पाथीभराको मुल मूर्ति वरपर स–साना मूर्ति छन्। चैते नवमी र बडादसैंमा मन्दिरमा मेला लाग्छ। देवीलाई विषेशगरी महिलाका सगुन चिज जस्तै चुरा, टिका, धागो, पच्छयौरी, साडी लगायत सामाग्रि चढाइन्छ। त्यसरी चढाएका सामान ५० बर्ष भन्दा मुनिकाले लगाउनु हुँदैन भनिन्छ। पाथिभराबाट आँखा डुलाउँदा चारैतिर हरिया डाँडाको लस्कर देखिन्छ। कुनै ठूला, कुनै साना। डाँडाका बीच बीचमा देखिने सुन्दर बस्तीहरु। मन्दिर क्षेत्रमा चल्ने सिरसिरे बतासले शरिरमा उर्जा भर्छ।
आकाश खुल्दा पाथिभराबाट उत्तरतिर सेता हिमालसँगै काठमाडौको पुरा दृष्य देखिन्छ। सूर्योदय र सुर्यास्तको दृश्य पनि राम्रो हुन्छ। मन्दिर क्षेत्रमा पसल छैन। राम्रा होटल र रिसोर्ट खोलेमा पाथिभरा राम्रो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्छ। पिकनिक स्पट बनाउन पनि जरुरी छ। गाउँमा होमस्टे चलाउन सकिन्छ। नल्लु प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी हो। नल्लुको पूर्वमा भारदेउ र काभ्रे पर्छन भने पश्चिम र दक्षिणमा दल्चोकी र उत्तरमा लेले। तामाङ जातिको बसोबास रहेको नल्लु चिटिक्क छ। चारैतिर डाँडा, बीचमा कलकल बगेकी नल्लु खोला, हरिया खेतीबाली। एक दिने पदयात्रा गर्न उपयुक्त गन्तव्य।
मणिचुडलाई पौराणिक भाषामा मृगेन्द्र पर्वत भनिन्छ। शंखचुर अर्थात शिवपुरी डाँडा पनि भनिन्छ। यसको पूर्वमा लप्सेफेदी, नाङलेभारे र गन्थमादन पर्वत पर्छन। ६४ शिवलिंग मध्ये कागेश्वर, मणिचुडेश्वर, योगेश्वर र नारायणेश्वर यही डाँडामा पर्छ। दह भएको ठाउँमा बज्रयोगिनी खेल्न आउँथिन्। एक दिन खेल्दाखेल्दै उनको कमण्डलु खसेकाले त्यहाँ दह उत्पत्ति भयो। त्यसैले दह कमण्डलु आकारको भएको। पछि त्यहाँ स्तुप र मन्दिर बनाइयो।
देवतै देवताको सहर हो साँखु। साँखु बजारमुन्तिर शाली नदी छ। किनारमा महादेव, स्वस्थानी, गणेश, नागनागिनी, हनुमान, बद्रीनाथ, वासुकी आदिका मूर्ति छन्। हिन्दु शास्त्रअनुसार विष्णुले पार्वतीलाई स्वस्थानी माताको व्रत बस्ने विधि सिकाए। पार्वतीले नदी किनारमा व्रत बसेर महादेव स्वामी पाइन्। त्यसैले शाली नदी क्षेत्रमा माधवनारायणको प्रतिमा साक्षी राखी व्रत बसिन्छ। ब्रत १ महिना चल्छ। साँखुमा केही होटल र नेवार खाजा घर छन्। कृषिमा निर्भर छन् साँखुबासी। धान, गहु, आलु राम्रो उत्पादन हुन्छ। साँखु तिब्बत जाने प्रबेशद्वार पनि हो। पहिला पहिला ल्हासा जानेहरु यतैबाट ओहोर दोहोर गर्थे। भृकुटीको बज्रयोगिनीमा स्वयंवर गराएर तिब्बत हुँदै भोट लगेकाले त्यही बेलादेखि तिब्बत ल्हासा व्यापार चलेको हो। साँखुबाट २ किमिमा बज्रयोगिनी मन्दिर छ। जंगल बीचमा ढुँगा ओच्छाइएको सिंढी चढेर मन्दिर पुगिन्छ। त्यहाँबाट साँखुको पुरा दृश्य देखिन्छ। १६ औं शताब्दीमा राजा प्रताप मल्लले बनाएको बज्रयोगिनी मन्दिर हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्वीको साझा तीर्थ हो। तीन तले मन्दिरको प्रबेशद्वार अगाडि सिंहका मूर्ति छन्। नजिकै ठुलो घन्ट छ। मन्दिर पछाडि धारा छन्। आगोको रश्मीबाट उत्पन्न भएको हुनाले बज्रयोगिनीलाई उग्र ताराको रुपमा पनि पुजिन्छ। मन्दिरको टुप्पामा स्यानो स्तुप छ। मन्दिर मास्तिर जात्रा हुँदा बज्रयोगिनीलाई राख्ने घर छ। चैत्र पूर्णिमादेखि एक साता बज्रयोगिनी जात्रा मनाइन्छ। बज्रयोगिनीलाई नेवारको इष्ट देवता समेत मानिन्छ। बज्रयोगिनी दर्शन गरी ठाडो उकालो चढ्दा आधा घन्टामा घुमारेचौर पुगिन्छ। घुमारे चौर तामाङहरुको बस्ती हो। बज्रयोगिनी, घुमारे चौर हुँदै करिब २ घन्टा ठाडो उकालो चढेपछि नार्गाजुन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुृञ्ज कार्यालय पुुगिन्छ। त्यहाँ प्रबेश शुल्क तिरेपछि मात्र प्रबेश पाइन्छ। वनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट दुई बाटा छन्। सिधा गए सुन्दरीजल पुगिन्छ। दायाँ ठाडो उकालो चढे मणिचुड। तीन घन्टा उकालो चढेपछि खुल्ला चौरमा पुगिन्छ। त्यहाँबाट ५ मिनेटमा मणिचुड। शान्त छ ठाउँ। त्यहाँ फागुन–चैतमा गुराँस फुल्छ। कात्तिकदेखि माघसम्म हिमाल खुल्छ। त्यहाँको चौरमा क्याम्पिङ गर्न निकुञ्जसँग अनुमति लिनु पर्छ। डाँडामा खाजा पसल छैनन्।
काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा फुल्चोकी (२,८०० मिटर) हो। बषैभरि शीतल हुन्छ त्यहाँ। डाँडाको थाप्लोमा हिन्दुको फुलचोकी मन्दिर र बौद्धमार्गिको चैत्य छ। हिन्दु र बौद्धमार्गीको साझा तिर्थ हो फुल्चोकी। खुला आकाशमुनि ढुङ्गैढुङ्गाका मूर्ति र त्रिशुल छन्। अबिरले राताम्मे। सँगै चैत्य पनि। नयाँ वर्षमा मेला लाग्छ। पौराणिक भनाइ अनुसार देवीका चार दिदी बहिनी– चम्पादेवी, नागार्जुन जामाचो, शिवपुरी र फुल्चोकी हुन्। ती मध्ये सबैभन्दा उचाइमा बसेकि फुल्चोकी। हिमालय दर्शनका लागि फुल्चोकी प्रख्यात छ। पुस–माघमा डाँडामा हिउँ पर्छ।
गोदावरीबाट फुलचोकीसम्म मोटर बाटो छ। हाइकिङ गर्दा गोदावरी कुण्डबाट जंगलको बाटो उकालो लाग्नु बेस हुन्छ। कुण्डबाट २ घन्टामा चापाखर्क पुगिन्छ। खर्कमा चौबाटो छ। पूर्व ओरालो झरे काभ्रेको ¥याले पुगिन्छ। उत्तर लागे कोटडाँडा, पश्चिम झरे गोदावरी। दक्षिण उकालो चढे २ घन्टामा फूलचोकी। फर्कंदा पश्चिम ओरालो झरेर गोदावरी नौधारासम्म हिँड्ने। ठाडो उकालो र ठाडै ओरालो भएकाले जंगलको बाटो साहासिक छ। घना जंगलमा वनस्पति र चराचुरुङी अवलोकन गर्न सकिन्छ। जंगलमा चितुवा, विरालो, लोखर्के, कालो भालु पाइन्छ। बाँदर त सधैं भेटिन्छन्। किरा–फटयाङग्रा र रंगविरंगका पुतलीहरुले लोभ्याउँछन्। फुल्चोकीको आधारशिविर गोदावरी आफैंमा वनस्पति केन्द्र हो। गोदावरी प्रख्यात पिकनिक स्पट पनि हो। मिश्रित जाति बसोबास रहेको गोदावरी धार्मिकस्थल पनि हो। जहाँ नौधारा र कुण्ड छन्। गोदावरीमा खाजा घर, रिसोर्ट र होटल पनि छन्। गोदावरीबाट फुल्चोकीसम्म हाइकिङ, बाइकिङ, मोटर ड्राइभिङ र साइक्लिङ पनि गर्न सकिन्छ। कसरी पुग्ने ः काठमाडौं–गोदावरी १५ किमि। लगनखेल बसपार्कबाट गोदावरी पुग्न गाडिमा एक घन्टा। गोदावरीबाट जंगलको बाटो हुँदै हाइकिङ गर्ने। फुल्चोकी टप पुगेर नौधारासम्म पदयात्रा गर्ने। हाइकिङ दुरी करिब १८ किमि। समय ७ घन्टा। जीप र मोटरबाइक फुल्चोकीसम्मै पुग्छन्। अनन्तलिंगेश्वर भक्तपुर बजारको दक्षिणमा पर्ने अनन्तलिंगेश्वर शदियौं पुरानो मानिन्छ। मन्दिर वरपर बासुकि नाग, उमामहेश्वर, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, गरुड आदिका मूर्ति छन्। अनन्तलिंगेश्वर (१,४३० मिटर)मा १२ वैशाख ०७२ को भुकम्पले मन्दिरमा क्षति पु¥याएको छ। अहिले स्थानीय समितिले प्यागोडा शैलीमा पुनःनिर्माण गर्दैछ। त्यहाँ सातौं शताब्दीमा राजा नरेन्द्र देवले राख्न लगाएको शिलालेख छ। त्यस हिसाबले पनि यो १३ सय वर्ष भन्दा पुरानो मन्दिर हो। चारैतिर पहरा बीचमा छन् अनन्तलिंगेश्वर। रमणिय ठाउँको मन्दिर दक्षिणमा फूल्चोकी, पूर्वमा डोलेश्वर महादेव र आशापुरेश्वर छन् भने पश्चिममा चरखण्डेश्वर र उत्तरमा शुर्वणेश्वर महादेव छन्।
मन्दिर हातामा अनन्त कुवा र पोखरी छ। कुवाको पानी पिए रोग निको हुने जनविश्वास छ। राणाकालमा कुवाको पानी काठमाडौंको दरबारसम्म पु¥याइन्थ्यो रे। खडेरी परेमा चित्रपुर (दधिकोट)को नेवार समुदाय बाजागाजाका साथ पानी माग्न अनन्तलिंगेश्वर आउने चलन छ। मन्दिरमा साउने सोमबार, शिवरात्री, जनैपूर्णिमा, बाला चतुदर्शी, गाइजात्रा, तीज, दशैतिहार आदि समयमा भिड लाग्छ। चैत–वैशाखमा पुग्न सके त्यहाँ लालीगुराँसको यौवन हेर्न पाइन्छ। मन्दिरबाट माथि कैलाश डाँडा (१,४९० मिटर)बाट काठमाडौंको दृश्य छर्लङै देखिन्छ। असोजदेखि १८० डिग्रिमा हिमालको रेञ्ज देखिन्छ। निलो आकाश मुन्तिर उपत्यकाको दृश्य।
डाँडामा भ्यू टावर बनाउन सके तिर्थालुका साथै अन्य पर्यटकलाई समेत आर्कषित गर्न सकिन्छ। पिकनिक स्पट र खाजा पसल भैदिए काठमाडौंबासीको विकेण्ड मनाउने थलो बन्न सक्छ दधिकोट। डाँडामा होटल तथा गेष्टहाउस बन्नेक्रममै छन्। महादेव दर्शन गरेर रानीकोट र लाँकुरी भञ्ज्याङ हाइकिङ गर्न सकिन्छ। अनन्तलिंगेश्वरबाट सडकैसडक तिवारी आश्रम, देउराली हुँदै रानीकोट पुग्न सकिन्छ। लाँकुरी भञ्ज्याङ जाने र रानीकोट जाने दोबाटो छ देउरालीमा। अनन्तलिंगेश्वर–देउराली ५ किमि। देउराली–रानीकोट ४ किमि।
रानीकोट मुन्तिर छ घ्याम्पेडाँडा। रानीकोट–घ्याम्पेडाँडा ३ किमि। डाँडाको पुछारमा पाइलट बाबा आश्रम छ। आश्रमबाट चारैतिर सुन्दर दृश्य देखिन्छ। पश्चिमपट्टि गुण्डु र दधिकोट। पश्चिमदेखि उ्रत्तरतिर काठमाडौं र भक्तपुरको दृश्य, उत्तरमा काठमाडौं र दक्षिणमा काभ्रे देखिन्छ। त्यहाँ सोमनाथ मन्दिर, ध्यान कक्ष र पुस्तकालय छ। रानीकोट र घ्याम्पेडाँडालाई केन्द्र बनाएर आशापुरेश्वर, डोलेश्वर, अनन्तलिंगेश्वर, लाँकुरी भञ्ज्याङ र फुल्चोकी हाइकिङ गर्न मिल्छ। यो रुट साइक्लिङलाई उपयुक्त छ। साइक्लिङ गर्दा ठिमीबाट गाम्चा, दधिकोट, अनन्तलिंगेश्वर, तिवारी आश्रम, देउराली, रानीकोट, घ्याम्पेडाँडा हुँदै सूर्यविनायकसम्म गर्नु राम्रो हुन्छ। घ्याम्पेडाँडा–सूर्यविनायक ४ किमि।
दलचोकी दक्षिणी ललितपुरको शीतल गन्तव्य होे–दलचोकी (२,२०० मिटर)। जहाँ मन र मस्तिष्क दुवै शान्त र शीतल बन्छ। डाँडाबाट सूर्योदय र सूर्यास्त राम्रो देखिन्छ। आकाश उघ्रिएका बेला छयाङ् हिमाल देखिन्छ। अन्नपूर्ण, मनास्लु, गणेश, दोर्जे लाक्पा, लाङटाङ, गौरीशंकर लगायत हिमाली शृङखला। दलचोकी डाँडामा मनकामना मन्दिर छ। मनको इच्छा पु¥याइदिने देवी हुन मनकामना। ध्यान, योग र अध्यात्मको केन्द्र बन्न सक्छ दलचोकी गाउँ। जहाँ बाहुन, क्षेत्री, तामाङ, मगर, नगरकोटी र सुनुवार समुदायको बसोबास छ। गाउँले कृषिमा निर्भर छन्। गाई, बाख्रा र कुखुरा पाल्छन्। यहाँ उत्पादित तरकारी र दूध काठमाडौं पु¥याइन्छ। दलचोकीको पूर्वमा चौघरे, नल्लु, भारदेव, बुखेल, मानिखेल र फूल्चोकी टप देखिन्छ भने पश्चिममा भट्टेडाँडा गाविस। उत्तरमा सेता हिमाल र तलतल काठमाडौं, टीकाभैरव र लेले गाविस देखिन्छ। दक्षिणतिर हरिया डाँडाको लहर। गाउँले जनजीवन बुझ्न उपयुक्त छ दलचोकी। अनौठो मौसम हुन्छ, दलचोकीमा। छिनमै घाम लाग्छ, छिनमै बादल मडारिन्छ। भुइँकुहिरोभित्र लुकिरहन्छ दल्चोकी। जंगलको बाटो भएकाले यात्रामा चितुवा, मृग, वनबिरालो, खरायो, कालिजलगायत जीवजन्तुसँग जम्काभेट हुन सक्छ।
दलचोकी प्रचुर पर्यटन सम्भावना भएको ठाउँ हो। प्रदूषणबाट टाढा। काठमाडौंबाट मात्र २१ किमि दक्षिणमा अवस्थित दलचोकीलाई काठमाडौंको भेडेटार भने फरक पर्दैन। गर्मी छल्न र विकेण्ड मनाउन सकिन्छ। कसरी पुग्ने सातदोबाटोबाट २० किलोमिटर दुरीमा दल्चोकी। लगनखेलबाट लेले जाने गाडीमा टीकाभैरव झर्ने। टीकाभैरवबाट दाया“ गोरेटो दक्षिण लाग्ने। हाइकिङ दुरी १६ किलोमिटर। मोटरबाटो दलचोकीसम्मै पुग्छ। पदयात्रा सिजन असोजदेखि फागुनसम्म। तर, वर्षैभरि पदयात्रा गर्न सकिन्छ। दलचोकी टपबाट पूर्व ठाडो ओरालो झर्दै मनकामना मन्दिर हुँदै गोठ भन्ज्याङ, बासुकी, शिखर्पा हुँदै टीकाभैरवसम्म पदयात्रा गर्न पनि मिल्छ। जताबाट जाँदा पनि चढ्न तीन घन्टा र ओर्लन दुई घन्टा।
ध्यान दिऔं पदयात्राको विकास संगै घुम्ने प्रबृति बढेको पाइन्छ तर कतिपय हाइकर्सले अव्यवस्थित रुपमा पदयात्रा गरेको पाइन्छ। लामो दुरीको होस् या छोटो जुनसुकै पदयात्रा गर्दा पनि व्यवस्थित भएर हिड्नु पर्छ। नभए अप्ठेरोमा पर्न सकिन्छ। विज्ञसँगको कुराकानी, पुस्तक र अनलाइनबाट जाने गन्तव्यको पूर्व जानकारी लिने। त्यहाँको भुगोल, हावापानी, बाटो आदि बुझ्ने। बहुदिने पदयात्रा गर्दा पहिल्यै होटल तथा लज बुक गर्ने। एक्लै होइन, समूहमा हिँड्ने।
(हाइकिङ विज्ञ महर्जन प्रकृतिप्रेमि समूहसँग आबद्ध छिन्।) प्रकाशित मिति:
शनिबार, माघ २९, २०७३ ०९:५२:१३